के कुनै पनि एथेटिस्टिक धर्महरू छन्?
शब्द "मूर्ख" शब्द पूर्व-क्रिश्चियन, प्रकृति-आधारित धार्मिक परम्पराहरूमा लागू हुन्छ। पुगुन धर्महरू प्रायः प्रजातन्त्रवादी हुन्छन्, तर एक व्यक्तिको लागि दुर्गम देवताहरु को रूपान्तरणका रुपमा सम्भव छ र वास्तवमा अवस्थित छैन। यो मूर्ख कथाहरु को वास्तविक घटनाहरु को तुलनात्मक रूप मा धोखाधड़ी को रूप मा अलग देखि अलग छैन, केहि जो पनि अधिक सामान्य छ। यदि झूटो विश्वासले विश्वास गर्दैन कि देवताहरू तिनीहरूको परम्परामा वास्तविक हो, त्यसोभए तिनीहरू शायद पापी हुनेछन्।
कसैलाई यो लेबल लगाउन सक्दछ, तर अन्यहरू यसको साथ सहज हुन्छन् र खुल्ला रूपमा निन्दा गर्ने पापीहरू (वा atheistic pagans) को रूपमा चिनिन्छन्।
त्यहाँ एक हिन्दू सामर्थ्य छ?
संस्कृत शब्द nirisvaravada अस्तित्व मा अनुवाद गर्दछ र एक निर्माता ईश्वर मा कर्तव्य को मतलब छ। यसले कुनै अन्य चीजमा अविश्वासको आवश्यकता पर्दैन जुन "ईश्वर," हुन सक्छ तर सृष्टि भन्दा कम केहि पनि पहिलो स्थानमा साँचो ईश्वर होइन। हिन्दू दर्शनको सममिषा र मिम्सामा स्कूलहरूले सृष्टिकर्ता ईश्वरको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्छन्, उनीहरूले हिन्दू परिप्रेक्ष्यबाट स्पष्ट रूप देखि आकस्मिक बनाएका छन्। यसले उनीहरूलाई प्राकृतिक बनाउँदैन, तर यसलाई पश्चिममा धार्मिक धर्मका दृष्टिकोणबाट कुनै पनि विश्वास प्रणाली , दर्शन वा धर्मको रूपमा उनीहरूलाई अस्थिर बनाइन्छ।
त्यहाँ बौद्ध सामथ्य छ?
बौद्ध धर्म व्यापक रूपमा अस्तित्ववादी धर्मको रूपमा मानिन्छ। बौद्ध धर्मशास्त्रले पनि प्रबर्धन ईश्वरको अस्तित्वलाई प्रवर्द्धन वा सक्रियता गर्दैन, "अल्प" देवताहरूको अस्तित्व नैतिकताको स्रोत हो, र मानवहरूले कुनै देवतालाई कुनै कर्तव्य दिन्छन्।
यद्यपि, यी शास्त्रीयहरूले अलौकिक प्राणीको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्छन् जुन देवताको रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ। आज केही बौद्धहरू त्यस्ता प्राणीहरूको अस्तित्वमा विश्वास गर्छन् र यसवादी छन्। अरूले यी प्राणीहरूलाई खारेज गर्छन् र पापीहरू हुन्। त्यहाँ बौद्ध धर्मको बारेमा केही छैन जुन भगवानहरूमा विश्वास चाहिन्छ, बौद्ध धर्ममा पार्थिव गर्न सजिलो छ।
के जैन एथ्याज्म छ?
जेन्सका लागि, हरेक प्राणी वा आध्यात्मिक समान प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ। यसको कारण, जेसनले कुनै "उच्च" आध्यात्मिक प्राणीहरूको देवता जस्तो पूजा गर्दैनन् न त तिनीहरूले कुनै मूर्तिहरूको पूजा गर्न वा पूजा गर्छन्। ज्यानहरू विश्वास गर्छन् कि ब्रह्माहरू सधैं अस्तित्वमा छन् र सधैं अवस्थित हुनेछ, त्यसैले कुनै सृष्टिकर्ता ईश्वरको लागि कुनै आवश्यकता छैन। यसका कुनै पनि अर्थ छैन कि कुनै आध्यात्मिक प्राणीहरू अवस्थित हुन सक्छ जुन "देवता" भनिन्छ, र यसरी जैनले देवताहरूलाई विचार गरिन सक्छ र ती प्राणीहरूमा विश्वास गर्न सक्छ भन्ने विश्वास हुन सक्छ। एक पश्चिमी धार्मिक परिप्रेक्ष्य देखि, यद्यपि, उनि सबै पापी थिए।
के त्यहाँ एक कन्फुसिआन वा ताओस्ट अस्तित्व छ?
एक कार्यात्मक स्तरमा, कम से कम, कन्फुगेरियनवाद र टोओवाद दुवै atheistic विचार गर्न सकिन्छ। न त एक विश्वासकर्मी ईश्वरीय जस्तै ईसाई धर्म र इस्लाम को विश्वास मा स्थापित छ। न त त्यस्ता देवता को अस्तित्व को बढावा दिछन। कन्फुगुआन ग्रंथहरूले "स्वर्ग" को वर्णन गर्दछ जुन एक सभ्य , व्यक्तिगत शक्ति हो। चाहे यो व्यक्तिगत देवता को रूप मा योग्य हो वा एक बहस को विषय होइन, तर यो कम से कम एक व्यक्ति को कन्फ्यूसिआ शिक्षाहरु को पालन गर्न को लागि र एक पार्थिव हुन सक्छ। मूलतया ताउवाद को लागि त्यहि मुद्दा अवस्थित छ: केहि देवता मा विश्वास शामिल हुन सक्छ, तर बिल्कुल जरूरी नहीं हुन सक्छ।
त्यहाँ यहूदी साम्राज्य छ?
यहूदी एक एकल सृष्टिकर्ता ईश्वरमा विश्वासको आधारमा एक धर्म हो। यो मोहम्मद को ज्ञात सबै भन्दा पुराना र प्रारम्भिक रूपहरु मध्ये एक हो। तथापि, त्यहाँ यहूदीहरू छन् जसले यो ईश्वरमा विश्वासलाई खारेज गरेका छन् जसलाई सम्भवतः यहूदी धर्मका विशेषताहरू बनाए। केही अवस्थाहरूमा मानिसहरूले धेरै कम राखेका छन् र आफूलाई यहूदीहरूलाई जातीय कारणहरूको लागि बोलाउँछन्। अरूले यहूदी परम्पराहरूको ठूलो सम्झौता र आफूलाई यहूदीहरूलाई मात्र सांस्कृतिक, तर एक धार्मिक परिप्रेक्ष्यबाट पनि बोलाइदिन्छन्। तिनीहरू आफैलाई हरेक बिन्दुलाई यहूदीको रुपमा मान्छन् जसले परमेश्वरमा विश्वास गर्न जारी राख्छन्।
के त्यहाँ एक ईश्वरवाद छ?
यहूदी धर्मको सन्तानको रुपमा, ईसाई धर्म एक रचनात्मक ईश्वरमा विश्वासको आधारमा एक धर्म पनि हो। अस्थिरताले मात्र खारेज गरेको छैन, तर पापलाई मानिन्छ। त्यहाँ केही व्यक्तिहरू छन् जसले आफैं मसीहीहरूलाई विचार गरे तापनि तिनीहरूले ईश्वर सृष्टिकर्ता ईश्वर सहित कुनै देवताको अस्तित्वमा विश्वासलाई खारेज गरेका छन्।
उनीहरूले तर्क गर्छन् कि तिनीहरू मसीही धर्मप्रार्थ छन् जसमा केही यहूदीहरू पनि पापी छन्: उनीहरूले ठूलो मात्रामा सांस्कृतिक कारणहरूको लागि ईसाई हुन्, तर केही धार्मिक अवलोकनहरू जारी राख्छन् - कुनै पनि देवताहरूको सन्दर्भ बिना।
आधुनिक असाधारण धर्म र सताब्दी
देवताहरूको विषयमा साइन्टोलोजीले केही भन्नको लागि। यसले "एक" एक देवता ईश्वरीय अस्तित्वको "स्वीकार" गर्छ, तर यसको बारेमा केहि सिकाउँदैन र सदस्यहरूले फिट देखेर पूजा गर्न अनुमति दिन्छ। यो एक वैज्ञानिकशास्त्री को लागी पूजा गर्न र विश्वास नगर्ने सम्भव हुन सक्छ। रालियालीहरू स्पष्ट रूपमा र "बहुसंख्यक" पापी हुन्, यस अर्थमा अस्तित्व र अस्तित्वका लागि स्वतन्त्रता आक्रामक रूपमा पछ्याउँदै छ। अन्य आधुनिक यूएफओ धर्महरू , ईश्वरहरू जस्तै अलौकिक प्राणीहरू जस्तै ईश्वरहरू जस्तै विश्वासको वरिपरिका आधारमा आधारित छन्, कमसेकम पनि कम्युनिष्टको लागि अनुमति दिन्छन् भने खुलासा गर्दैन भने धर्मवादको भन्दा अधिक वैज्ञानिक र तर्कसंगतको रूपमा।
मानववादी, प्राकृतिक र धार्मिक र आलोचना
आज मानववादी धार्मिक समूहहरू छन् जसले विश्वासी प्रणालीहरूको समर्थन गर्दछ जुन मनुष्यहरूको आवश्यकताहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ र अहिलेको समयमा (वा कम से कम कम से कम) अलौकिक विश्वासहरू सामान्य रूपमा अस्वीकार गर्दा। यूनिटेरियन युनिभलिस्ट चर्चहरूको सदस्यहरूको एक महत्त्वपूर्ण प्रतिशत पार्थिव हुन्, यद्यपि यी चर्चहरूमा पनि ईसाई, पृष्ठभूमिका र अरू समावेश छन्। नैतिक संस्कृति समूहका सदस्यहरू कुनै देवताहरूमा विश्वास गर्न सक्दछन् वा हुन सक्दैनन्; केहि पनि नैतिक संस्कृतिलाई आफैंको लागि एक धार्मिक समूहको रूपमा मान्दैनन् यद्यपि यसलाई कानून अन्तर्गत धर्म मानिन्छ। धार्मिक मानवतावाद बिना देवताको धार्मिक सन्दर्भ बनाउँछ।
अल्बर्ट आइंस्टीन को एक व्यक्तिगत भगवान मा विश्वास को अस्वीकार
एक पापी हुनुहोस् किन?
एडल्फल्फ हिटलर एक ईसाई थियो
क्रिसमसको छुट्टिमा के गर्नेहरू
समलैंगिक विवाहको लागि नैतिक र सामाजिक तर्क
ज्योतिष र मनोविज्ञान: मानिसहरू किन विश्वास गर्छन्?
का वचन - काजोकू
सापेक्ष क्लज (व्याकरण)
के म व्यापार गर्दछु वा व्यवसाय बनाउनुपर्छ?
कसरी: Wave the Lulav and Etrog on Sukkot
अमेरिकी क्रांति: भगवान चार्ल्स कर्नालिस
आपतकालीन पाठ योजना विचारहरू
वाइकिंग साइट्स - पुरातन नं
Cutoff सीट पोकर मा
किन युद्धको युद्धमा झन् झन् झन् झन् झन् झन् झन् झन् झल्किन्थ्यो
मुख्य आर्किटेक्ट द्वारा गृह डिजाइनर सफ्टवेयर मा एक नजर
इटालीमा तपाईंको परिवारको बारेमा कसरी कुराकानी गर्ने?
'बल को मार्क' र 'गोल्फ बल को चिह्नित'
10 अरबी संगीत स्टार्टर सीडी
बौद्ध धर्म मा निर्भर उत्पत्ति को सिद्धान्त
प्राय: लिखितमा मजेदार निष्क्रिय निष्क्रिय आलोचनात्मक नोटहरूको 20
कम्प्लेक्स इन र प्रत्याशित प्रतिक्रियाहरू
चित्रा स्केटिङ आहार र सुझावयुक्त भोजन योजना
फुटबल 101 - एक फुटबल खेल सुरु हुने आधार